Dhirta Caafimaadka laga Helo! | Dhaymoole News
Dhirta Caafimaadka laga Helo!
October 10, 2019 - Written by wariye999
Geedka Dacarta “Aloe Vera” waa geedaha aan jirridda lahayn, waxaana u ka baxaa dhulka banaan ee cimiladoodu kulaylka tahay aduunka oo dhan. Dhererkiisu waa 60-100 cm, caleemihiiisuna way balaadhan yihin. Geedkan waxa loo adeegsadaa dhinaca caafimaadka.
Geedka Dacarta waxa ku jira Faytamiino iyo maadooyin jidhku u baahan yahan iyo macdano muhiim ah sida Acid Cholarin iyo Folic iyo Faytamiinada B1-B6. Dacarta waxa laga helaa fitamiino iyo maadooyin jidhku aanu ka maarmin, waxaana ka mid ah fitamiinka A, C,E, Folic acid, Choline, B1, B2, B3, B6 iyo B12. Waxaa kaloo ku jira macdnaha muhiimka ah ee Calcium, Magnesium, Zinc, Chromium, Selenium, Sodium, Iron, Potassium, Copper iyo Manganese.
Dacartu sida la cadeeyay waxay dawo ka tahay xanuunada maqaarka sare ku dhaca sida cuncunka iyo nabarada. Iyo xanuunada dheefshiidka.Geedka Dacartu waxa kale oo uu wanaagsan yahay xanuunada lafaha ku dhaca ee roomantiisamku ka mid yahay. Laakiin Cabista iyo isticmaalkaDacarta ayaa halis ah haddii aanay soo marin shaybaadh iyo dhakhtaro.
Waxa kale oo iyana khatar leh in la cabo xilliga dumarku uurka leeyihiin, caadada, haddii aad Baabasiir jirto, iyo hadii beerka iyo xameetada uu xanuun ka hayo.